UMongameli Thomas Jefferson Iinkcukacha ezifutshane
UMongameli wesithathu waseMerika
U-Thomas Jefferson wayengumongameli wesithathu wase-United States, emva koGeorge Washington noJohn Adams. Ubungameli bakhe mhlawumbi uyaziwa kakhulu kwi-Louisiana Purchase, ukuthengwa komhlaba omnye oye wabuyela ngokuphindwe kabini ubukhulu belizwe laseMelika. UJefferson wayechasene ne-Federalist owayethatywe nguorhulumente omkhulu kunye noveliso oluthiwa amalungelo phezu kwamagunya aseburhulumenteni. Ngokungafanelekanga, iJefferson yaziwa ngokuba yindoda yokwenene yokuvuselela i-Renaissance, enomdla omkhulu kunye nengqondo yesayensi, ukuzakhela, ukufunyanwa kwemvelo nezinye izinto ezininzi.
NgoAprili 13, 1743
Julayi 4, 1826
Matshi 4, 1801 ukuya kuMatshi 3, 1809
Inani leMigaqo ekhethiweyo
UJefferson wayengumhlolokazi e-ofisi. Umfazi wakhe, uMartin Wayles Skelton, wafa ngo-1782.
Urhulumente ubhetele olawula ubuncinci. "
UStephen Jefferson uthe wabiza unyulo lwe-1800 njengo-"Revolution we-1800" kuba lo luwowokuqala ukhetho kwi-United States entsha apho ulawulo lukaMongameli lwaluvela kwelinye icala linye. Kwaphawula ukuguquka okunokuthula kwamandla okuye kwaqhubeka nanamhla. Nangona kunjalo, xa iivoti zokuvota zibalwe, ngoxa uTomas Jefferson atyhile uJohn Adams ekugqibeleni, ukhetho ngokwalo lwabangela ingqungquthela. Oku kungenxa yokuba uvoti aluzange luhlukanise phakathi kwabaviwa kunye no-vice-presidential candidates kanti uJefferson wathola inani elifanayo levoti yokhetho njengowomyeni wakhe uAron Burr.
Ivoti yaphonswa kwiNdlu yabaBameli apho ithatha amavoti angama-36 ngaphambi kokuba uJefferson aqambe igama lokuba ngumongameli. Emva koko, iCongress yadlulisela isilungiso seshumi elinesibini esenza ukuba abavoti bavote ngokukhethekileyo kumongameli kunye no-vice-president.
Iziganeko ezinkulu ngexesha e-Ofisi
Imfazwe ehamba phambili (1801-1805), apho iJefferson yabonisa iMelika ukuzimisela ukungahloneli abalawuli bamazwe aseBharbary kunye neemfuno zabo zokufumana iindleko - ngokuqinisekileyo ukukhusela imali ekukhuseleni ukuhlaselwa kwamaqhinga eMeditera.
Ukuthengwa kweLouisana (1803): Ukuthengwa kweJefferson yaseLouisana Territory evela eFransi, ukuhamba okwaqala njengomzamo wokukhusela ichweba laseNew Orleans kwaye iphelile phantse ubukhulu becala be-US.
U-Lewis kunye no-Clark Expedition (1804-1806): UJefferson uthumela iCorps of Discover, iqela lehambo elikhokelwa nguMeriwether Lewis noWilliam Clark, ukuhlola indawo entsha efunyenwe kwi-Louisiana Purchase.
Ukuqedwa koRhweba lweeNgxoxo (1807): Lo Mthetho weCongressism wenzelwe ukuqeda ukubandakanyeka kweMelika kwi-intengiso yehlabathi, ikakhulukazi ukungenisa kwamakhoboka ase-Afrika. Kwagqitywa ngo-1807 kwaye yaqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 1808, emva kokuphela kweCandelo le-1, iSigaba 9, Umhlathi 1 we-siseko, owenqabela iCongress ekunqandeni ubugqila de kunyaka ka-1808.
Amazwe angena kwi-Union xa e-Office
Uxhasane no-Thomas Jefferson Resources
Ezi zixhobo ezongezelelweyo ku-Thomas Jefferson zingakunika ulwazi olungaphezulu malunga nomongameli kunye namaxesha akhe.
Thatha ingqwalaselo ejulile kumongameli wesithathu we-United States ngokusebenzisa le nkcazelo ephathelele ubuntwaneni bakhe, intsapho, umsebenzi wamasosha, ubomi bokuqala kwezopolitiko kunye neziganeko ezinkulu zokulawula kwakhe.
Isibhengezo soKhusela ekuqaleni kwakuluhlu lwezikhalazo malunga noKumkani George III. Yayibhalwe nguTomas Jefferson xa wayeneminyaka engamashumi amathathu nantathu ubudala.
Thomas Jefferson kunye ne-Louisiana Purchase
Ingxoxo yeentshukumo zikaJefferson kunye nefuthe eli lizwe elijongene nalo mhlaba lalinalo eMelika. Yintoni namhlanje ibonakala ngathi ukuthengiswa okugqibeleleyo kwanikezela umngeni kwifilosofi yaseJefferson.
Ingxoxo malunga neMfazwe yeNguqulelo njengenyaniso 'yokuguqulwa' ayiyi kusombululwa. Nangona kunjalo, ngaphandle kwalo mzabalazo waseMelika usenokuba yinxalenye yoBukumkani baseBrithani.
Eminye iminyeko kaMongameli
UJohn Adams : UMongameli wesibini wase-United States wakhonza omnye kuphela kwi-ofisi kodwa waba nefuthe njengelungu leNgqungquthela yokuQala neyesiBili yeCape Continents kunye ne-Vice-President yokuqala kunye nezinye iindima.
UJames Madison : Elandela uJefferson njengoMongameli, uMadison ubizwa ngokuba ngu "Baba woMgaqo-siseko" kwaye wayengomnye wabalobi abathathu bee-Federalist Papers.
UJames Garfield: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Inkcazo yeSebenzi yokuFuna iNgeniso
Ukungqubuzana kwezenkolo ngokungathathi hlangothi, iMithetho yezoLuntu
Ubambe isiKhosi seNyanga epheleleyo
Umsebenzi emva kweminyaka emine
Indlela yokufaka i-Makeup Stage
Ingcamango yokuLungisa i-Ice Science
Izimbali zaseJapan kwiZizekeliso
Amanqaku kwiNgxelo yokuqala yoNks. Magazine
Inkcazo kunye noBuchule boBungqina beNgcaciso
Ngowe-2017 iCorvette Grand Sport yavezwa
10 I-Craziest Villains kwi 'Avatar: The Last Airbender'
ICentral Connecticut State University